UMika 4 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ke kaloku, ekupheleni kwemihla, intabaintaba yendlu kaYehova iya kuzinza encotsheni yazo iintabaiintaba, yona iziphakamele iinduliiinduli, zibe ngumsinga izizwe ukuya kuyo.
2 Ziya kubamba iintlangaiintlanga ezininziezininzi, zithi, Hambani, sinyuke siye entabeni kaYehova, endlwini yoThixo kaYakobi, ukuze asiyalele iindlelaiindlela zakhe, sihambe ngomendo wakhe; kuba uya kuphuma eZiyon umyalelo, nelizwi likaYehova eYerusalem.
3 Uya kugweba phakathi kwezizwe ezininziezininzi, ohlwaye iintlangaiintlanga ezinamandla, ade ase kude; ziwakhande, amakreleamakrele azo abe ngamakhuba, nezikhali zazo zibe zizitshetshe zokuthena imidiliya. Uhlanga aluyi kuphakamisela kuhlanga ikrele lalo, bangabi safunda ukulwa.
4 Baya kuhlala elowo phantsiphantsi komdiliya wakhe, naphantsi komkhiwane wakhe, kungabikho uboyikisayo; kuba umlomoumlomo kaYehova wemikhosi uthethileuthethile.
5 Kuba zonke izizwe zihamba, sona eso egameni lothixo waso; thina ke sihamba egameni likaYehova uThixouThixo wethu, ngonaphakadengonaphakade kanaphakadekanaphakade.
6 Ngayo loo mini, utshoutsho uYehova, ndiya kubahlanganisa abaqhwalelayo, ndibabuthe abagxothiweyo, nabendibaphethe kakubi;
11 Ngoku ke kuhlanganisene iintlangaiintlanga ezininziezininzi ngawe, zisithi, Mayihlanjelwe, ayibone amehloamehlo ethu iZiyon.
12 Ke zona ezi azizazi iingcingaiingcinga zikaYehova, aziliqondi icebo lakhe; kuba uzibuthile njengezithungu zesanda.
13 Suk ume, ubhule, ntombi inguZiyon, kuba uphondouphondo lwakho ndilwenza isinyithi, neempuphu zakho ndizenza ubheduubhedu. Uya kucola iintlanga ezininziezininzi, uyisingele phantsi kuYehova inzuzoinzuzo yazo embi, ubusingele phantsi kwiNkosi yehlabathi lonke ubutyebiubutyebi bazo.
Exploring the Meaning of UMika 4
2 Samuweli 8:11
1 Kumkani 5:5
2 Kumkani 17:29
2 yeziKronike 36:20, 23
IiNdumiso 20:6, 24:1, 7, 25:8, 46:10, 83:5, 147:2
INgoma yazo iiNgoma 4:4
UIsaya 1:20, 2:1, 2, 10:7, 24:23, 32:17, 41:15, 51:4, 60:7, 22
NguYeremiya 4:31, 23:4, 30:6, 7, 10, 31:8, 32:40, 51:33
UHezekile 17:23, 34:16, 38:16, 17, 43:7
Obhadiya 1:12, 21
UMika 2:12, 13, 5:2, 3, 7
UZefaniya 3:13, 19, 20
UZekariya 8:22, 9:9, 10:12, 12:3, 6, 14:10